Myanmar Now သတင်းထောက်ချုပ် ကိုဆွေဝင်းကို တိုင်ကြားခဲ့သူ ကျော်မျိုးရွှေ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMyanmar Now သတင်းထောက်ချုပ် ကိုဆွေဝင်းကို တိုင်ကြားခဲ့သူ ကျော်မျိုးရွှေ
Myanmar Now သတင်းထောက်ချုပ် ကိုဆွေဝင်းကို တိုင်ကြားခဲ့သူ ကျော်မျိုးရွှေ
“ ဝီရသူ ပါရာဇိကကျပြီး ရဟန်းဘဝ နိဌိတံသွားပြီ၊ ပါရာဇိက အခုမှကျတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး”
ဆိုတာပြောလို့ Myanmar Now သတင်းထောက်ချုပ် ကိုဆွေဝင်းကို ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ၆၆(ဃ)နဲ့မန္တလေးမဟာအောင်မြေမြို့နယ် အမှတ် ၇ စခန်းမှာ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားလိုက်တဲ့ သူဟာ ကျော်မျိုးရွှေ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ တပ် မတော်သားတစ်ဦး မဟုတ်သူ အရပ်သားစစ်စစ် မန္တလေးတိုင်း တစည ပါတီအဖွဲ့ဝင်၊ ယခင် စစ်သွေးသစ္စာ အကောင့် ပိုင်ရှင်၊
မန္တလေး မဘသ အဖွဲ့ဝင်၊ မျိုးချစ်မြန်မာ ရဟန်းတော်များ သမဂ္ဂ (မန္တလေး) အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဟု ယူဆရသူ၊ မန္တလေးတွင် ရိုဟင်ဂျာ ကန့်ကွက်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ( အားလုံးမှာ ဓာတ်ပုံ အထောက်ထားများ အရ သိရ )
တပ်မတော်ကိုလေးစားသူ၊ စစ်အရာရှိကြီးတွေနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတာကို မွေ့လျော်သူ၊
၁၅ – ၁ – ၂၀၁၇ ( တနင်္ဂနွေ )နေ့ မန္တလေးမြို့ ၆၂ လမ်း မနော်ရမ္မံ လူထုဟစ်တိုင်ကွင်းမှာ
တရားသောစစ်အောင်မြင်စေကြောင်း လူထုထောက်ခံဆွေးနွေးဟောပြောပွဲမှာ ၊ ဘူးလက် -လှဆွေ၊ မျိုးချစ် ( မန်းတက္ကသိုလ် ) နဲ့အတူ ကျော်မျိုးရွှေ ( စစ်သွေးသစ္စာ ) တို့က အတူတကွ ဟောပြောခဲ့သူ
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ ဖိုတိုရှော့များ မတင်ရွှေဟု ခေါ်ပြီး အရေးသားများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သူ
ကွီးဖြိုးအား သောက်ပိုတွေသိပ်မပြောပါနဲ့အ၆မရာ ! (အခြောက်မ) ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သူ
တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
သူဖေ့ဘုတ်ပေ့ခ်ျမှာ ရေးသားခဲ့တာတွေ အများကြီးထဲက ထင်ရှားတဲ့ စကားတွေ ကတော့-
” နောက်ထပ် ကြည်လင်းတွေ အများကြီး အများကြီး ရှိသေးတာ မမေ့ထားပါနဲ့ ”
” ဒီတစ်ကြိမ် လိုအပ်လို့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းရင် သမိုင်း တရားခံက ဗိုလ်ချုပ် သမီးပဲ”
” နိုင်ငံရေး မရောနှောတဲ့ သံဃ်ာအရေးတော်ပုံ အစစ်ကြီး မကြာမှီ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်”
← အမှန်တရားအတွက်….လွှတ်တော်…အလုပ် လုပ်ပါတော့… – #Stand with #Unite with Ko Swe Win
ကိုဆွေဝင်းအား ပုဒ် ၆၆ (ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းမီဒီယာနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များက ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် သဘောထားကြေညာချက် →
5 thoughts on “Myanmar Now သတင်းထောက်ချုပ် ကိုဆွေဝင်းကို တိုင်ကြားခဲ့သူ ကျော်မျိုးရွှေ”
အိမ်လိပ်စာ တိုက်ခန်းအလွှာ အတိအကျနဲ့ တိုင်ကြားတယ်။
မပေးဘဲ တိုင်ကြားတဲ့လူ မရနိုင်ပါဘူး။
ဆက်သွယ်ရေး ပုဒ်မ /သာညှိုး .. ဘာညာနဲ့
မဘသ က တရားစွဲနိူင်တယ်
ဝီရသူ ဆိုတဲ့ ကတုံးအစုပ်အပြတ်ကို
ခွေးလို ဝိုင်းကိုက်ကြဦးမယ် …
နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော် အချောင်းနဲ့ထိုးသမျှ ခံလာရတာက ကျင့်သားရပေမယ့်…
လွှတ်အခံရခက်တယ် … တော်ရုံစကေးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ
ကိုဆွေဝင်း (Myanmar Now)က ဦးဝီရသူ အကြောင်းရေးလို့ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) နဲ့ တရားစွဲဖို့ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့် တိုင်တန်း ခံထားရတယ်လို့ သိရတယ်။ တည်ဆဲ ဥပဒေ ဖြစ်နေတာ၊ နည်းဥပဒေ မရှိသေးတာကြောင့် ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) အကြောင်း လတ်တလော ဘာမှ မပြောလိုပါ။ ဒါပေမယ့် အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ရေးသားတဲ့ သတင်းစာ ဆရာကို တရားစွဲဖို့ ဥပဒေက ရှိပြီး တိုင်းဖျက် ပြည်ဖျက် လူသတ် စက်ဆုတ် ရွံရှာစရာ ကောင်းတဲ့ အကြမ်းဖက် သမားတွေကို အတိအလင်း ကျေးဇူးတင်စကား ပြောတဲ့ ဦးဝီရသူ လိုမျိုးကို တရားစွဲဖို့ ဥပဒေ မရှိတာ (ကျနော် မသိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။) အတော် မကျေမနပ် ဖြစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်မယ့် ကိုဆွေဝင်းကို အကူအညီပေးပါမယ်။ ဥပမာ တရားရုံးမှာ သွားပြီး တရားခံပြသက်သေ အဖြစ် ထွက်ဆိုပေးတာမျိုး၊ အခြား လိုအပ်သမျှ အကူအညီ ပေးတာမျိုးပေါ့။
ကိုဆွေဝင်းတွေများလာရင် ဝီရသူတွေ ပျောက်ကုန်မယ်။
Soe Min added2new photos.
အမုန်းတရားများဖြင့် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများကို အရေးယူရန် ပျက်ကွက်နေဟု အစိုးရကို ကိုဆွေဝင်း ဝေဖန်
အမုန်းတရားများဖြင့် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများကို အရေးယူရန် ပျက်ကွက်နေပြီး သွေးထိုးလှုံဆော်သူများအကြောင်းကို ဖော်ထုတ်သူများကိုမူ ဖမ်းဆီးရန် ပြင်ဆင်နေသည့် အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်ကို Myanmar Now သတင်းဌာန၏ သတင်းထောက်ချုပ် ကိုဆွေဝင်းက ဝေဖန်လိုက်သည်။
”ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ နယ်နိမိတ်စွဲမရှိဘဲ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းရေးဖို့က ကျနော်တို့တာဝန်ပဲ။ ကျနော်တို့ သတိထားတာက ကိုယ်ရေးတာက မှန်ကန်တိကျဖို့၊ ဓမ္မနည်းလမ်းကျဖို့၊ လောကလူသား အချင်းချင်းထားရမယ့် လောကပါလ တရားတွေကို အထောက်အကူပြုဖို့၊ လူကိုလူလိုမြင်ပြီး၊ လူကိုလူလိုစာနာဖို့ပဲ”
ကိုဆွေဝင်းအား တိုင်ကြားရာတွင် အခြားသူများ သိရှိရန်ခက်ခဲသည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးနံပါတ်နှင့် မကြာသေးမီကက ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေသည့် ၎င်း၏ အိမ်လိပ်စာကိုပါ အတိအကျ ထည့်သွင်းတိုင်ကြားခြင်းသည် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတခုခု၏ လက်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သင်္ကာမကင်းဖြစ်ရကြောင်းလည်း ကိုဆွေဝင်းက ပြောသည်။
”ဒီသတင်းအချက်အလက်(မှတ်ပုံတင်နဲ့ လိပ်စာ)ဘယ်ကရလဲ။ ကျွန်တော် တိတိကျကျပြောမယ်။ ဒါပြည်ထဲရေးက မပေးဘဲ ဒီသတင်းအချက်အလက် ရစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတခုခုက မပေးဘဲရစရာ အကြောင်းမရှိဘူး”ဟု ကိုဆွေဝင်းက ပြောသည်။
ဝီရသူကဘက်က တောင်းပန်ရန် ကမ်းလှမ်းမှုကို ကိုဆွေဝင်းက ပယ်ချလိုက်ပြီး လူသတ်ဝါဒကို အားပေးသည့် ဦးဝီရသူကို တောင်းပန်ရန် အကြောင်းအရင်းမရှိဟုလည်း တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။
ကိုဆွေဝင်းက ဦးဝီရသူ၏ ရာဇဝတ်မှုကို အားပေးသည့် လုပ်ရပ်များကို ထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ပြီး အစိုးရ၏နှုတ်ဆိတ်နေမှုအပေါ်လည်း မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
“ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကို ဘယ်သူဘဲ ကျူးလွန်ကျူးလွန်၊ ဘယ်သူဘဲလုပ်လုပ်၊ ဒါကိုအားပေးအားမြှောက် ဘယ်နိုင်ငံမှ လုပ်လို့ မရဘူး”ဟု ကိုဆွေဝင်းက ဝေဖန်ခဲ့သည်။
“(ဦးဝီရသူဟာ) တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းဘဲ အမုန်းတရားတွေ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ အမြဲတမ်းပဲ တောက်လျှောက် တနိုင်ငံလုံးကိုပတ်ပြီး မီးမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒါတွေဟာ အားလုံးအသိဘဲ” ဟု ကိုဆွေဝင်းက ဆိုသည်။
post from Frontier Myanmar